Pages: 1234567 8910 11 | Go Down
Author Topic: ကိုယ်တိုင်ရေး သရော်စာ (Read 70583 times)
« on: March 10, 2011, 11:00:43 PM »
Country Big Son!!!
အခုတလော ဟိုနားကျွတ်စီစီ ဒီနားကျွတ်စီ စီ ကြားနေရတာကတော့ ဘာတဲ့ နိုင်ငံဂျီးသားစိတ်ဓာတ်တဲ့ ကဲ ဘဂျီးတုပ်လို ဗြိတိသျှစကား သိပ်မတက်သူကတော့ ဘာသာပြန်လိုက်တယ်(Country Big Son)!!!
ဘဂျီးတုပ်တည်းဟူသော သကောင့်သား တယောက် သိကြားစောင်မလို့ ခြင်သေ့ရုပ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဝေဟင်ခရီးကနေ မြေကျောရှုံ့ပီး ရောက်သွားလေ၏
ခြင်သေ့ရုပ်တိုင်းပြည်လို့ သမုတ်ရခြင်းကတော့ ကျုပ်တို့ဘမာတွေက အဒီတိုင်းပြည်မရောက်နဲ့ ရောက်တာနဲ့ အဒီ ပါးစပ်ကသေးပေါက်တဲ့ ခြင်သေ့ရုပ်ရှေ့ မှာ ဝင့်ဝင့်စားစား နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဘဲ ရိုက်ပီး မျက်ခွက်စာအုပ် (Face Book)ပေါ်တင်တင် ထားတော့ ဒီတောသား ဘဂျီးတုပ်လဲ အထက်ပါ တိုင်းပြည်ကို ခြင်သေ့တိုင်ပြည်လို့ ခေါ်ရလေ၏
ကဲ တောသာဘဂျီးတုပ် ခြင်သေ့တိုင်းပြည်လဲရောက်ရော လေဆိပ်မှာစတွေ့တာဘဲ လူတွေ လမ်းမလျှောက်ဘဲ ရွေ့နေတာများ လား လား!!!!! အံ့ဖွယ်ဗျာ
ဂလိုနဲ့ လေဆိပ်ကထွက်ရော လူတွေတန်းစီနေကျတယ်ဗျ ဒါနဲ့ ဘဂျီးလဲ အတူပါလာသူ မြို့သားမောင်ချောကို
ဟ ကောင်မောင်ချော!! ဟိုမယ်လူတွေဘာတန်းစီနေတုန်း လာ တို့လဲ သွားတိုးရအောင် "
ဟု ပြောလည်းပြော ကျုပ်တို့ဆီမှာလို ငါးဖယ်တိုးမလို့ လဲလုပ်ရော
မောင် ချောမှ အထိတ်တလန့်နဲ့
ဟိုက်!! ဘဂျီး အဒီလိုကြားဖြက်လို့ရဘူးဗျ နောက်ကနေတန်းစီရတယ်ဗျ!
အဒါ တက်ကစီ ငှါးဖို့ တန်းစီနေတာလေ
ဘဂျီးလဲ သိပ်တော့မကြည်ဘူး ဒါပေသည့် သူက ဦးဆောင်လာသူစိုတော့ ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေလိုက်တယ်
ဒါနဲ့ဘဲ တက်ကစီပေါ်ဝယ် တောသားမြို့ရောက်ဘဂျီးတုပ်တရောက် လမ်းကကကောင်း ကားကကောင်းနဲ့ ဟိုငေးဒီငေးလိုက်လာရက ဗျုန်းစို ကားကရပ်သွားလို့ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ မီးပွိုင်မိတာကိုး အမယ် ဒီတိုင်းပြည်ကကောင်တွေ က "ငအ"တွေဟ တခုခုစို တန်းစီနေရော
ဘေးကြည့်လိုက်တော့ ဘာကားမှမရှိဘူး ဒီတော့ ဘဂျီးတုပ်တွေးမိသည်ကား
အင်း ဒီဒရိုက်ဘာ အတော်အတာဘဲ တို့ဆီမှာလို ကျော်ခွပီး အနားရောက်မှဝင်တာမဟုတ်ဘူး "အ" ပကွာ ထမင်းငက်မယ် ဒီလိုသာမောင်းရင် ဟု တွေးမိကာ
!!ဟကောင်မောင်ချော ဒရိုင်ဘာကို အောက်ကနေပက်ကျော်ခိုင်းလကွာ လဖွတ် အောက်ကျောမှာအလွတ်ကြီး အနားရောက်မှ ဟီးဟီး တို့ဆီမှာလို လက်ကလေးထောင်ပီး ဟိုလိုလေး လုပ်ခိုင်းလကွာ!!!
ဘဂျီး!!! ဒီမှာ အဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဗျ အားလုံးက ကိုရောက်ရာမှာ တန်းစီပီး စောင့်ရတာလေ"
ဒုတီရံပီ ဘဂျီးတုပ်မကျေမနပ် နှုပ်ဆိတ်နေလိုက်ရပြန်တယ်!!
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်ရောက်တော့ စပီ ဇာတ်လမ်းက ဘဂျီးတုပ်တရောက် ခံတွင်းချင်လာပီ ဒီတော့ အဖွာတော်လေး ရှုအုံးမှဘဲစိုပီး ဆေးလိပ်လေးထုပ်ပီး မီးချစ်မယ်လုပ်တုန်း
ဟိုးဟိုး!! ဘတုပ် မောင်ချော၏ အလန့်တကြားသံ
ဟကောင် မောင်ချော ဘာတုန်း ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ တန်းစီရမှာလား လဂွ
ဟုတ်ဘူး ဘဂျီးရ ဘဂျီးခုသောက်မဲ့နေရာက သောက်မရဘူး
ဟကောင် နင်ဘဲ အမှိုက်ပုံးထောင်ထားတာတွေ့ရင် သောက်ရတယ်စို
ဒါတော့ ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့ အဒီအမှိုက်ပုန်းမှာ ဆေးလိပ်ခွက်လိုဟာမပါရင် သောက်လို့မရဘူးဗျ
လဖွတ်ကွာ !!! ဒီဆေးလိပ်သောက်ဖို့အရေး အမှိုက်ပုန်းမှာ ဆေးလိပ်ခွက်ပါတာလိုက်ရှာရလိုဖစ်နေပီ!
အိုဘဂျီးကလဲ ဒီမှာက ဓာတ်တိုင်တတိုင်ကို ၁ခုလောက်ရှိတာ ဟော ဟိုရှေ့မှာ တွေ့ပီ သွားသောက်ချေ!!
ဟိုက် ဟုတ်သားဟ တခုနဲ့တခုနီးနီးလေးရယ်
ဒီမြူနီစပယ်တွေကွာ ဦးဏှောက်နဲလိုက်တာ အမှိုက်ပုန်းတွေ အများဂျီးလိုက်ချထားတာ ဘတ်ဂျက်တော့ ကုန်ပါပီကွာ
တို့ဆီမှာလို အမှိုက်ကန်လေးတွေဆောက်ပေးပီး သဘာဝကြကြ အပုတ်နံ့လေးရှူပီး သောက်ရမှာကွ ဟီးဟီး
ဘဂျီး နိုင်ငံဂျီးသားပီသတယ်ဆိုတာ အဒါဘဲဗျ စည်းကမ်းကိုဘယ်သူမှစောင့်ကြည့်မနေဘူး ကို့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကို စောင့်ထိမ်းတာလေဗျာ
တော်ပါကွာ နင့်ရဲ့နိုင်ငံဂျီးသား တရားကို!
ဘဲ့နဲ့ ဟိုနေရာလဲ တန်းစီ ဒီနေရာလဲ တန်းစီ လဂွ ထမင်းစားဖို့တောင်တန်းစီနေရတာမနိပ်ပါဘူးကွာ
တို့ဆီများ ကားကြားထဲကို ဖင်လေးကော့လိုက် ဘိုက်လေးရှပ်လိုက်နဲ့ ရှောင်ရတာ နဂါးတိုင်းပြည်က ရှောင်လင်ကျောင်းကိုယ်တော်တွေကို သနားတယ် ဟင်း ဟင်း!
ဒီလိုနဲ့ ဘဂျီးတုပ်၏ှ country big son တရားကို မောင်ချောမှ ခေါင်းလေးတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ နာလာရလေသည်
ဟကောင် မောင် ချော ငါ့ကို ဟိုခြင်သေ့ပါးစပ်ကသေးပေါက်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးစမ်းကွာ
ဒါမှမဟုတ် ဟို သင်းဘောဂျီးနောက်ခံထားပီး ဒုံပက် ရိုက်လို့ရမဲ့နေရာ ဖြစ်ဖြစ် ဘာတဲ့ ဆန်တိုနာ စိုလား ဘာလားကွာ သဲသောင်လေးရှိတဲ့ ကမ်းချေလား အဒီကို ပို့ကွာ
အလဲ့ ဘဂျီးက ဘယ်ခေတုန်း ဒါတွေတယ်သိပါလား ဘယ်လိုသိတုန်းဗျ
ဟကောင်ရ တို့ဘမာတွေ ဒီတိုင်းပြည်ရောက်ရင် အဒီနေရာတွေမှာ အလုအယက် သွာပီးဒုံပက်ရိုက်ပီး သောက်ခွက် စာအုပ်ပေါ် တင်တင်နေတာလေ
နာလဲ အားကျမခံ အဒီနေရာတွေမယ် ရိုက်မှ ခေတ်မှီမယ်ထင်လို့ပါ ဟီးဟီး
ဂလိုနဲ့ ဘဂျီးတုပ်တရောက် ခြင်သေ့ပါးစပ်က သေးပေါက်တိုင်းပြည်မှ အပြန် လေယာဉ်ပေါ်ဝယ် အတွေးနယ်ချဲ့မိသည်ကား
"အင်း !!အဒီတိုင်းပြည်ကကောင်တွေ လာပစေအုံး ဒင်းတို့ကို တို့ရဲ့ Country big son ပညာကောင်းကောင်းပေးရမယ်ဒါမှ လွတ်လပ်ချင်းရဲ့ အရသာကိုသိမှာ" ဟု စဉ်းစားပီး လေယာဉ်မယ်အလစ်တွင် ငုံလာသောကွမ်းအား ပြစ် ခနဲခိုးထွေးလိုက်ပါတော့သည်
« Last Edit: December 08, 2011, 03:13:39 AM by Bagyitoke »
« Reply #1 on: March 25, 2011, 02:17:14 AM »
တစ်နေ့သ၌ Naked News သတင်းဌာနမှ CEO ကိုရင်ပြုံး ဦးဆောင်သော ဖင်ပြောင်တစ်စုတို့ အကျွန်ုပ်တို့ ပျော်စံရာ တက္ကသီလာ အချစ်ကျွန်းသာဆီသို့ အင်တာဗျူး(၀ါ) မဟုတ်ကဟုတ်ကများ မေးမြန်းရန် ရောက်ရှိလာကြကုန်၏
ပထမဦးစွာ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီမှ မော်ကွန်းထိန်း(၀ါ)မော်ကြီး(၀ါ)ဘကြီးတုပ်ကို အင်တာဗျူးရန်အလို့ငှာ ပြင်ဆင်ကြကုန်၏။ ဖြစ်နေတာလူကြီး ဖြစ်ချင်တာ ဘူးကြီးဟု ဆိုအပ်သော ဘကြီးတုပ်သည် ၄င်းတောင်ရှည် အသာချွတ်လျှက် ဘောင်းဘီတိုနံငယ်ပိုင်း ကိုယ်ဗလာအရိုးပြိုင်းတို့ကို ပြသကာ (လူကြီးဖြစ်သောကြောင့် အားနာစွာဖြင့် နံငယ်ပိုင်း ပေးဝတ်ထားသည် ဤကား စကားချပ်) အင်တာဗျူးမလေးများရှေ့တွေ မြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်နေလေသည်။ အင်တာဗျူးမည့်လူသိုက်မှာ ကိုရင်ပြုံးအား အ၀တ်အစားများချွတ်ပေးခြင်း မဲသောနေရာများ လူမြင်ကောင်းအောင် ပေါင်ဒါဖို့ပေးခြင်းစသော အင်တာဗျူဝါတို့၏ပြုဖွယ်ကိစ္စအ၀၀တို့ကို ပြင်ဆင်နေကြလေသည်။
လူကြီးဖြစ်သောကြောင့် CEO ကိုပြုံးကိုယ်တိုင် တန်းလန်းဗျူးမည်ကိုသိလျက် မသိသားဆိုးရွားစွာဖြင့် ဘကြီးတုပ်တစ်ယောက် ကောင်မလေးများရှေ့တွင် ဟန်ရေးပြနေပြန်လေသည်။ ကိုရင်ပြုံးတုံးလုံးဖြစ်ကာမှ ရင်တွင်းထကြွတဏှာရာဂတို့သည် မှေးမိန်ပျောက်ကွယ်လျက် နာယကဂုဏ်ခြောက်ပါး စုံလင်စွာဖြင့် မျက်နှာပုပ်သိုးကာ အဗျူးခံလေ၏။
ကိုပြုံး -- Who are you?
ဘကြီးတုပ် -- နင့်ဂျီးတော်လင်ထင်လို့လား
ကိုပြုံး -- အမယ် ဗျှစ်တစ်ရှပ်လို နားလည်တယ်ဟ မြန်မာလိုပဲမေးတာ ကောင်းပါတယ် ဦးက ဒီကျောင်းမှာ ဘာလုပ်ပါသလဲ
ဘကြီးတုပ် -- နင့်သောက်ပူပါလား
ကိုပြုံး -- (ဒီလူကြီးနဲ့တော့ ခက်နေပြီ ဘယ်လိုမေးမေး ဂွတိုက်နေတာပါပဲလား) ခင်ဗျား ကျောင်းမှာ ဘာလုပ်သလဲ
ဘကြီးတုပ် -- မော်ကွန်းထိန်းလေ သိသိကြီးနဲ့မေးနေတာပဲ ငါ့များ အားတယ်ထင်နေလား
ကိုပြုံး -- မအားရအောင် ဦးက ဘာတွေအလုပ်ရှုပ်နေပါသလဲ
ဘကြီးတုပ် -- အင်း.. ပြောရရင်တော့ ရှည်သကွာ
ကိုပြုံး -- ဒါဆို မပြောနဲ့တော့လေ
ဘကြီးတုပ် -- အေး လဂွကွာ ပြောပါမယ်ဆိုမှ
ကိုပြုံး -- ပြောပါ ပြောပါ ကျနော်တို့က ဦးတို့လိုလူတွေရဲ့ ကိစ္စတွေကို သိချင်တာပါ
ဘကြီးတုပ် -- တိုတိုတုပ်တုပ်ပြောရရင်တော့ ဦးက လူကြီးပေါ့ကွာ
ကိုပြုံး -- အင်း ရှင်းသွားတာပဲ ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆိုရင် ဦးတို့ တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေလေး သိချင်ပါတယ်။
ဘကြီးတုပ် -- ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ်ပဲ ပြောရမှာပါပဲ ကျောင်းသားများက စည်းကမ်းရှိကြပါတယ် တစ်ခါတစ်လေ ထထပြီး စန်းစန်းတင့် ကြတာက လွဲရင်ပေါ့လေ
ကိုပြုံး -- စန်းစန်းတင့်တယ်ဆိုတာ ဘာများပါလဲ
ဘကြီးတုပ် -- အင်တာဗျူးသမားဖြစ်ပြီး စန်းစန်းတင့်တောင်မသိဘူးတဲ့ သောက်ပိန်း လုံးဝမပြောဘူး သတ်ချင်သတ်ပလိုက်
ကိုပြုံး -- ဟုတ်ပါပြီ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အနေနဲ့ကရော
ဘကြီးတုပ် -- ကောင်းပါတယ် လူညီပါတယ် လက်တွဲပါတယ် ညှိနှိုင်းကြပါတယ် မူးကြပါတယ် ငြင်းကြပါတယ် ထဆော်ကြ... အဲ ထပြီးလည်း ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးကြပါတယ်
ကိုပြုံး -- ဟုတ်ပါပြီ ဦးအခုလို ပြောကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးအနေနဲ့ ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျနော်တို့ Naked News မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ ပိတ်သတ်ကြီးကို ဘာများပြောချင်ပါသေးသလဲ
ဘကြီးတုပ် -- ဦးအနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းနေပျော်၍ စာတော်ကြပါပေါ့ စန်းစန်းတင့် ကြတာလည်း တင့်ကြပါပေါ့ အတင့်လွန်ရင် အနှုတ်များမယ်ပေါ့ ဒါပါပဲ
ကိုပြုံး -- ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤသို့ ဗျူးပြီးသကာလ အင်တာဗျူးအဖွဲ့တို့သည် ကျောင်းတွင်းလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြကုန်၏ ။ ကျောင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းတော်သားတို့သည် အချစ်ကျောင်းတော်သားတို့ပီသစွာ ခေါတောတစ်သိန်းအင်အားဖြင့် အင်တာဗျူးအဖွဲ့မှ မိန်းကလေးများကို ကြည့်ရှူကြကုန်သည်ဖြစ်သောကြောင့် မိန်းကလေးအချို့မှာ သွေးလန့်နေကြပေပြီ။ ထိုကြောင့် CEO ကိုပြုံး သူ့ သငမလေးများ ကာယအိနြေ္ဒပျက်ပြားမှုမရှိအောင် ကျန်ရှိသူများကို အင်တာဗျူးရာတွင် အကျွန်ုပ်သာ တန်းလန်းဗျူးတော့အံ့ဟု ကြွေးကြော်လျက် နောက်တစ်ယောက် ဗျူးရမည့်သူကို ရှာလေ၏ ။
ပထမဆုံးတွေ့သော ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အင်တာဗျူးရန် ကောင်းသောသူဟု ကိုရင်ပြုံးစိတ်တွင် မှတ်ထင်လျက် အနားသို့သွားပြီး မိတ်ဆက်လေ၏
ကိုပြုံး -- မင်ဂါဘာ
အိုင်မေး -- မင်ဂါဘာ
ကိုပြုံး -- မေးချင်ပါတယ်
အိုင်မေး -- မေးတာမကောင်းဘူး ဦးလေး.. မေးရင် ဖြေရမယ် ဖြေရင်လေကုန်မယ် လေကုန်တော့မောမယ် မောတော့ မထုနိုင်ဘူး ထုနိုင်တောင် နှစ်ခါမထုနိုင်ဘူး ဒီတော့မကောင်းဘူးဦးလေး
ကိုပြုံး -- (ဒီကောင်တော့ သောက်ဂွပဲ ဘာအကြောင်းမှ မမေးရသေးဘူး မကောင်းဘူးတွေရော မဆီမဆိုင်ထုတာတွေရောက စနေပြီ သဘောပါသလားဟေ့) အင်း ညီလေးရာ ညီလေးနာမည်လေး ပြောပါဦး
အိုင်မေး -- အိုင်မေးပါ ခင်သူတေက နမေးတဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ မမအေးတဲ့ ဂိန်မေး တဲ့ တစ်ချို့သောကျနော့်ကို ကျိတ်ခိုက်နေသူတွေက ကိုမေးတဲ့ နအိုက်တဲ့ အမှီးတဲ့
ကိုပြုံး -- နာမည်တွေ များလှပါလား ညီလေးရာ
အိုင်မေး -- များတယ်လေ ဒါတောင် ကွယ်ရာမှာခေါ်တဲ့နာမည်ရှိသေးတယ် အိုင်မွှေးတဲ့ မီးမွှေးတတ်လို့တဲ့
ကိုပြုံး -- အော်အော် ဘယ်လိုများ မွှေးသလဲကွယ်
အိုင်မေး -- ကျနော်က ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် ပါတယ်လေ ကျောင်းထဲမှာဆို ကျနော်ဝင်မပြောတဲ့ အခန်းမရှိသလောက်ပဲ ကျနော်ပြောပြီဆိုလည်း ထပြီးရန်ဖြစ်ကုန်ကြရော
ကိုပြုံး -- အော် ဂလိုလား
အိုင်မေး -- အင်း ဂလို
ကိုပြုံး -- ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကရော
အိုင်မေး -- ကျောင်းသားတွေနဲ့တော့ ရှေ့တစ်မျိုး ကွယ်ရာတစ်မျိုး ဆက်ဆံတယ်လေ ကျောင်းသူတွေကိုတော့ ကျနော်က သားပြောမယားပြော အရမ်းပြောတာ တစ်ခါတစ်လေ ပေါ်တင်ပြောချင်လို့ ချိန်းတာတောင်မလာလို့ စာပေးပြောတယ်လေ အချစ်လို့ဆိုထားလေတော့ ကျနော်တို့က သားပြောမယားပြောပဲ ပြောတယ်
ကိုပြုံး -- ဒီတော့ လူကြီးတွေနဲ့ ပြဿနာမဖြစ်ဘူးလား
အိုင်မေး -- ဖြစ်ပါဘူး လူကြီးတွေက သဘောကောင်းကြပါတယ် လက်သီးပြင်းကြတာတစ်ခုပါပဲ
ကိုပြုံး -- ဒီတော့ ညီလေး ကျောင်းမှာပျော်လား
အိုင်မေး -- ပျော်ပါတယ် မိန်းကလေးတွေကို သားပြောမယားပြော ပြောမယ် အခန်းစုံအခန်းစိ ဆိုင်၏မဆိုင်၏သိသိမသိသိ ဂွလိုက်တိုက်မယ် ကိုယ်ဘယ်လောက်တော်ကြောင်းတတ်ကြောင်း မီးရှူးမီးပန်းဖောက်မယ် အဲ ပျင်းလာရင် မီးမွှေးမယ် ဒါပါပဲ
ကိုပြုံး -- ဟုတ်ပါပြီ ညီလေး အခုလို ပြောကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေး အနေနဲ့ ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကိုတို့ Naked News မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ ပိတ်သတ်ကြီးကို ဘာများပြောချင်ပါသေးသလဲ
အိုင်မေး -- ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ကျနော်တို့လို ကျောင်းပျော်စန်းစန်းတင့်တို့ ပျော်စံရာ တက္ကသီလာကြီးမှာ လာရောက်ပျော်ရွှင်စန်းစန်းတင့်နိုင်ပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်
ကိုပြုံး -- ခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိုင်မေး -- ကျနော်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤသို့ဖြင့် ကိုရင်ပြုံးမှ စန်းစန်းတင့်ဆိုသည်ကို သဘောပေါက်ပြီးသကာလ ကျောင်းတွင်းသို့ ဆက်လက်ချီတက်ရန် တာစူစဉ် သူ၏ သငမလေးများမှ အချိန်လင့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ၀ိုင်းဝန်းတားမြစ်ကြကုန်၏ ။ ကိုရင်ပြုံးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျောင်းသားကျောင်းသူ တို့ကို အင်တာဗျူးချင်စိတ်များ မျိုသိပ်လျက် နောက်တစ်နေ့ သို့တည်းမဟုတ် တစ်ရက်ရက်တော့ ထပ်လာဦးမည်ဟု စိတ်ထဲမှာ တေးမှတ်လျက် ၄င်း၏ သတင်းဌာနရှိရာသို့ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရ ပြန်သွားလေသတည်း။
« Last Edit: May 01, 2011, 11:57:23 PM by imail »
« Reply #2 on: March 26, 2011, 08:46:11 PM »
တစ်နေ့သ၌ အကျွန်ုပ် မောင်ဂိ တစ်ယောက် လမင်းဆေးပေါ့လိပ်ကိုဖွာရင်း လဖက်ရည် ပေါ့ဆိမ့်လေးနှင့် ဇိမ်ယူနေသည့် သကာလ ……….. ဗြုန်း ခနဲဆို ……. ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့သို အဝတ်မပါ ကိုယ်ဗလာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးနှင့် ဝတ်လစ်စလစ် မယ်ကလေးများ ရောက်ရှိလာသည်တမုံ့ ….. ။
ကျွန်ုပ် ။ ။ အောင်မငီး … လန့်လိုက်ထှာနော် …. ဒါဂျီးက အဒူ ဂျီးရဲ
ကျွန်ုပ် အဘယ်မျှလန့်သွားသနည်းဆိုလျှင် စကားများပင် မပီတော့ချေ ။
ထိုလူဂျီး ။ ။ မလန့်ပါနဲ့ ဂစ်ဂစ် ရယ် .. အဲလေ … ဂိဂိ ရယ် နာက နိကတ်နယူးချန်နယ်က ကိုရင်ပြုံးပါဟ ….
အော် … သည်တော့မှ ကျွန်ုပ် နှုတ်မိ၏ ။ အနှီ ပုဂ္ဂိုလ်သည် အချစ်တက္ကသိုလ် ပြန်ကြားရေးဌာန မှ ဘယ်တော့မှ ဦးပဇင်းမဖြစ်သည့် ကိုရင်ပြုံးပါတကား ။ ( ဦးလေးပြုံး စိတ်အဆိုးနဲ့ နော် ချစ်လို့စတာ … စိတ်ဆိုးရင် ခေါ်လော့ဘူး .. )
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ဒီက ဂိဂိ ကို နဲနဲဗျူးချင်လို့ ဟ … အရင်ဆုံး အဝတ်တွေချွတ် ……
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဗျန့်………….. ဗျူးတာနဲ့ ချွတ် တာ အဆိုင်ပူးထင်တယ်နော်
ဦးလေးပြုံး ။ ။ အောင်မယ် … ဒီငဂိ တော့ ကျောင်းပုံမှန်မတတ်ဖူးထင်ပ … နိကတ်နယူးက ဘယ်တုံးက အဝတ်ပါလို့လဲ … နင့်ကို ကျောင်းမတတ်ကြောင်း ဘဂျီးတုပ် နဲ့ တိုင်လိုက်ရမလား … ဟွန့်
ကျွန်ုပ် ။ ။ တိုင်တော့ …. မတိုင်ပါနဲ့ အူးလေးရယ် …. ချွတ်ဆိုချွတ် ……. ချွတ် …….
ကျွန်ုပ်၏ ပါးစပ်မှ ချွတ်ပဲရှိသေး၏ ဝတ်လစ်စလစ် မယ်လေးများက ကျွန်ုပ်၏ အဝတ်အစားများကို ဘစ်ပါမကျန်ဆွဲယူသွားချေပြီ ။ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ ……. လက်သွက်ချက်များပြောပါတယ် ။
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ကဲ … ဗျူးပီဟေ့ ငဂိ နင့်ကို ….. လာထား …. အရင်ဆုံး ….. နင့်ကို ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက် မေးမယ် … ဖြေပါ
ကျွန်ုပ် ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတော်ကြီး ဟာ …… ဟာ ………
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ရှည်တယ် တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပြော …. ကျောင်းထဲမှာတောင် မဆိုင်တာတွေကို ဖျက်နေတာ နင်ပါ အဖျက်ခံချင်လို့လား ………….
ကျွန်ုပ် ။ ။ အွင် …. တား ပြောတောင် အပြောရတေးပူးလေ ….
ဦးလေးပြုံး ။ ။ မပြောနဲ့ တော်ပြီ နောက်မေးခွန်း တစ်ခုပြောင်းမယ် … ဟိုတစ်နေ့က နာ ဗျူးတုန်းက ဘဂျီးတုပ်က ကျောင်းသားတွေ စန်းစန်းတင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ် … အာ့ ဘာပြောတာလဲ ဟင် …
ကျွန်ုပ် ။ ။ ကျောင်းသားတွေ စန်းစန်းတင့် ဖြစ်တာတော့ပြောမနေနဲ့ ကျောင်းထဲရောက်တာနဲ့ လွတ်ပြီကျွတ်ပြီ ပြောချင်တာ ပြောနိုင်ပီဆိုပီး ပြောချင်တာပြော လုပ်ချင်တာလုပ်နဲ့ .. စန်းစန်းတင့်တွေ ချည်းပဲ ..
ဦးလေးပြုံး ။ ။ အင် .. ဟုတ်ပူးလေ … အဲ့ဒီ စန်းစန်းတင့် ကိုသိချင်တာလေ …….
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဘာ …………………….. ! သတင်းသမားလုပ်ပြီး စန်းစန်းတင့်ကို မသိဘူး ဟုတ်စ …
အူးလေးပြုံးလဲ မငယ်သော မျက်နှာကို ကြံဖန် ငယ်ရင်း ………….
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် မောင်ဂိ … မသိလို့ပါ ပြောပြပါနော် ….. နာ နင့်ကို အပေါ်ခန်းမှာ ဘာဒွေရှိလဲ ပြောပြမယ်လေဟာ … နော် …..
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဟား ဟား ဟား …. အူးလေးပြုံးက လာဘ်ထိုးတာလား …………… ဘယ်တော့မှ မရဘူးမှတ် .. ဟင့် ဂိဂိ တဲ့ ၂ ဂိပဲ ရှိတယ် ၃ ဂိဆို လှီးထုတ်မယ် …. ဘာမှတ်နေလဲ ……
ဦးလေးပြုံး ။ ။ အဲ့လိုတော့ အလုပ်နဲ့လေ မောင်ဂိရယ် …. ပြောပြပါနော်
ကျွန်ုပ်လည်း အူးလေပြုံး စကားကိုကြားပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမှ မဖြေဆည်နိုင်ပဲ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြင့် ပြောလိုက်ရတော့သည် တကား ………
ကျွန်ုပ် ။ ။ အောင်မလေး … အူးလေးပြုံးရဲ့ အပေါ်ခန်းမှာ ဘာရှိလဲ သိချင်လိုက်တာနော် ………. ကျအု ကျအု .. ဒါပေမယ့်လေ … နော်လဲ စန်းစန်းတင့်က ဘာမှန်း မသိဘူး အူးလေးရဲ့ .. ငဲ့ ငဲ့ ကျအု ကျအု …. သူများ တင့် လို့ လိုက်တင့် တာ .. အဟင့် …. နော်သာ သိရင် အပေါ်ခန်းဘာ ဆိုတာ သိရပြီ ခုဆို … ခုလော့ .. ခုလော့ … ကျအု ကျအု ကျအု
( မှတ်ချက် ။ ။ ကျအု သည် ရှိုက်သံဖြစ်၏ )
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ထားပါတော့ ငါ့တူရယ် …….အူးလေး လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နောင်တရပါဒယ် .. အဟင့် .... အူးလေး မေးခွန်းပြောင်းပေးမယ်နော် … မငိုနဲ့တော့ တတ်တတ် … နောင် ငါ့တူလဲ ကျောင်းသားကြီး ဖြစ်မှာပါ …..
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဟတ် … ဟတ် … ဟတ်ကဲ့ အူးလေး …
ဦးလေးပြုံး ။ ။ နောက်မေးခွန်းက ဂိဂိ မင်းတုန်း အကြောင်း ဘာလို့ရေးလဲ ….
ကျွန်ုပ် ။ ။ ကျွန်တော် က ကျောင်းတော်ကြီးကို ရသစုံ စွာနဲ့ ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတွေ အားလုံး သိရအောင် ရေးတာပါ ……
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ကောင်းပ့ါကွာ …… ဒါနဲ့ ကျောင်းထဲမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ ရှိသေးလား ….
ကျွန်ုပ် ။ ။ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုဟုတ်လား … စိတ်ဝမ်းကွဲမှုဆိုတာ ဘာလဲ … ဘာဖြစ်တာလဲ …. ဘယ်လိုမျိုးကိုခေါ်တာလဲ ….. အနော့် ကို ပြန်လင်းပါဦး ….
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ကဲကဲ … မင့် မလဲ မသိတာနဲ့ မပြောချင်တာနဲ့ စုံနေတာပဲ … နောက်များ ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာ ဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ မောင်ဂိထင်လဲ …..
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဘာတွေလိုမလဲဆိုရင် …. လူတွေ … မောင်နှမ စိတ်ဓာတ်မွေးကြဖို့လိုတယ် ….. ဒီကျောင်းတော်ကြီးကို ပစ်စလတ်ခတ် သဘောမထားပဲ ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုးကြီးလို့ သဘောထားတတ်ဖို့ လိုပါတယ် …………….
ဦးလေးပြုံး ။ ။ ကဲ …… နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးမယ်နော် … ခုတလော ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ဘယ်သူတွေ ကြိုးစားအားထုတ်စွာ ပညာရင်နို့ စို့နေလဲ …..
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ် ….. ကျောင်းတော်သား ဖြစ်သွားသော … နောင် ဖြစ်လတ္တံ ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားအားလုံး ကြိုးစားပြီး ကျောင်တော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေပါတယ် …………….
ကျွန်ုပ်လဲ ပြောရင်းနှင့်မာန်တွေပါသည်ထင့် မတ်တပ်ထရပ်ရာ ဝတ်လစ်စလစ် မယ်လေးများအား နီးကပ်စွာ တွေ့ရထင့် ဖွားဘက်တော် ညီညီပါ အလိုက်မသိစွာဖြင့် ထကြွနေရာ ကျွန်ုပ်လဲ ရှက်လွန်းလှ၍ အနီးဆုံး ဝတ်လစ်စလစ်မယ်လေးအား ဆွဲ၍အကာအကွယ်ပြုလိုက်ရသည်တကား ………………. ။
ဤတွင် နိကတ်နယူးချန်နယ် နှင့် ကျွန်ုပ် သုသေတီ ဂိ တို့ အင်တာဗျူးခန်းပြီးဆုံး၏ ။
စာကြွင်း ။ ။ ပြန်ခါနီးတွင် အူးလေးပြုံးက နောက်ရက်များတွင် စားအရေးအသားကောင်းသော တိုက်ကြက်ကြီး … လွဲကုန်ပီ .. ဆြာတပ်ကြပ်ကြီး ၊ ယခုတလော ဟစ် ဖြစ်နေသော စီနီယာကြီး ကိုချန်းကိုနှင့်တကွ ကျောင်းတော်သား စာရေးဆရာ အပေါင်းတို့၏ ရင်တွင်းစကားသံများကို လိုက်လံဗျူးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည် ။
လွန်တာရှိ ဝန်တာမိ ဤနေရာမှ တောင်းပန်ပါ၏ ညီငယ်ဂိ
« Last Edit: May 01, 2011, 11:21:38 PM by imail »
« Reply #3 on: April 25, 2011, 01:08:18 PM »
ခေါင်းထဲမှာ ချာချာလည်နေသည်... ဟုတ်သည် စီအီးအို စင်္ကြာပြုံးတစ်ယောက် နံဘေးနား ပွတ်သီးပွတ်သပ်လာလုပ်နေသော
naked channel မှ ကောင်မလေးများကိုပဲ ဖီးလ်ငုပ်လောက်အောင် ဒီအတွေးကကြီးစိုးနေသည်....
မော်ကြီးကိုစလိုက်မိသည့် စန်းစန်းတင့်က ဂိ ကြီးဆီ ရောက်သည်အထိ တင့်တုန်းပဲ ဘာတွေ တင့်မှန်းလည်းလဲ မသိ
ဒီအချစ်တက္ကသိုလ်က လူတွေက အာဂချည်းပဲ မဖြစ်ဘူး ဒီလူတွေက နည်းနည်းမြင့်နေတယ် နည်းနည်းနိမ့်မယ့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို
ပြုံး --- ဟေ့ကောင်မလေးတွေ သွားမယ်ဟေ့
သံပြိုင် -- ဟေး....... ဘယ်သွားမှာလဲ
ပြုံး -- အချစ်တက္ကသိုလ်ကို ဗျူးစရာရှိတယ်
သံပြိုင် -- ဟင်း မသွားချင်ဘူး အဲ့က ကျောင်းသားတွေက ကြောက်စရာကြီးတွေ သူတို့ အစိကြီးတွေ ပြူးနေတာပဲ (မျက်စိပြောပါတယ်)
ပြုံး -- မရှည်နဲ့ လာသွားမယ်
ပြောပြီးသကာလ ရှေ့မှ ကားယား ကားယား ကွတ ကွတ နှင့်သွားနေသော စီအီးအို နောက်သို့ ကောင်မလေးတစ်သိုက်မှာ အထုပ်ကလေးများ
စီအီးအိုတစ်ယောက် ကျောင်းဝင်းထဲ ရောက်လျှင် ရောက်ချင်း တွေ့ကရာလူမမေးဝံ့တော့ပဲ လူရိပ်လူချေကြည့်ရာ
တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ နုံတဲ့ပုံမပေါက်၊ ထို့ကြောင့် စိတ်ညစ်နေစဉ်မှာပဲ ကောင်မလေးများထဲမှ မကေက
မကေ -- ဆရာ ဆရာ ကျောင်းထဲကို ဘယ်သူရောက်နေလဲ ကြည့်ပါဦး
ပြုံး -- ဘယ်သူလဲ
မကေ -- ဟိုမှာ ဆရာ
ပြုံး -- ဟာ ဟုတ်တယ်ဟ ပွပြီ လာလာ သွားဗျူးရအောင်
စင်္ကြာပြုံး တစ်ယောက် ဗျူးမည့်လူရှေ့အရောက်တွင် အလှပင် ပြင်မအားပဲ ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ကာ
ပြုံး -- အညာရောစေးရော
-- ဘာလဲ အညာက ဆီးယို ဆီးယိုမကြိုက်ဘူးဗျ ခင်ဗျားက ဘာလဲ ကိုယ်တုံးလုံး ဒုတ်ပြ ခဲပြနဲ့ ဘာကြီးတုန်း ပါချုပ်နဲ့ တိုင်လိုက်ရမလား
ပြုံး -- ဟိုက်ရှ် ဒီမင်းသား မြန်မာလိုတတ်တယ်ဟ မင်ဂါဘာ ခင်ဗျား ထယ်စောက်မဟုတ်လားဗျ
-- ထယ်စောက် ကိုးရီးယားမင်းသားကို ပြောတာလား မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော် နဂျေပါဗျ
ပြုံး -- ဟမ် ဟုတ်လား စောရီးဗျာ လူမှားသွားလို့ ညီလေးက ထယ်စောက်နဲ့ ချွတ်ပြီးစွပ်ထားသလိုပဲရော
နဂျေ -- ပြောကြတာပါပဲ ဥိးလေးရာ နေပါဦး ဦးလေးက ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ဘာတုန်းဗျ
ပြုံး -- သြော် ဒီလိုပါ ဦးလေးက naked channel က စီအီးအို ကိုရင်ပြုံးပါ အင်တာဗျူးရင် နံမည်နဲ့ညီအောင် တုံးလုံးလေးချွတ်ပြီး ဗျူးတာကလား
နဂျေ -- သူတို့လေးတွေရှေ့မှာလား ရတယ်လေ လာထား
သြော် ရတယ်လေ လာထားက နောက်မှ ချက်ခြင်းလက်ငင်းပင် ချွတ်လိုက်သည်မှာ မြန်မှမြန်
ပြုံး -- ညီလေးရေ ကိုယ်တို့ naked channel က မေးချင်တာလေးတွေ ကို ဖြေကြားပေးပါဦး
နဂျေ -- ရပါတယ် မေးပါ မေးချင်တာမေးပါ ဖြေချင်တာဖြေပါမယ် ပြောချင်တာပြောပါမယ်
ပြုံး -- တိန် လာပြန်ပြီလား မသိဘူး... ဒီလိုပါ ညီလေးရေ စတွေ့ကာစက ညီလေးက လောင်းကုတ်ကြီးတစ်ကားကား မာဖလာကြီးနဲ့ဆိုတော့
ဒီလောက်ပူတာ ဘာလုပ်နေတာလဲပေါ့နော် နောက်ပြီး ညီလေးမျက်နှာကလဲ ဒေါသများထွက်နေသလားလို့
နဂျေ -- ဒါက ဒီလိုပါ ကျောင်းမှာက ကျောင်းသူနည်းတယ်ဗျ ကျောင်းသားက များတယ် အနော့်က ကြိုးစားပမ်းစား ရှာဖွေထားတဲ့
ကောင်မလေးတွေ ရှိတယ်.. အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကို ခု ဒါးမြတိုက်ခံရတယ်ဗျ ခင်ညားကြီး တိလား
ပြုံး -- ဟေ ဒါးမြ ကျောင်းမှာ ဒါးမြရှိလို့လားကွယ်
နဂျေ -- ဒါးမြဆိုတာ အချစ်ဒါးမြ အေးဒါးမြတိုက်ခံရတာဗျ အီး ဟိးဟိး
ပြုံး -- ဘယ်သူက ဒါးမြတိုက်တာတုန်း
နဂျေ -- ကျုပ်ပြမယ် ဟိုမှာ ဂီတာထိုင်တီးနေတဲ့ ဘဲကြီးကိုတွေ့လား
ပြုံး -- အင်း
နဂျေ -- အဲ့ ဘဲကြီးက ချန်းကိုတဲ့ ကျုပ်ဘာကျူပ် ကောင်မလေးနဲ့ ကျူနေတာကို ဘေးနားထိုင်ပြီး ဂီတာလာတီးတာဗျာ
ကောင်မလေးက ကြိုက်လို့ဆိုပြီး လိုက်သွားရော အဲ့ဒါက တစ်ယောက်
ဟိုမှာ ဟိုမှာ ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ တစ်ယောက်တွေ့လား
ပြုံး -- တွေ့လိုက်တယ် အဲ့ဒါ ဟိုတစ်နေ့ ဦးလေး ဗျူးလိုက်သေးတယ် ဂိဂိတဲ့
နဂျေ -- ဟုတ်တယ် အဲ့ကောင်က သူ့ကိုယ်သူ SSA က စိုင်းလုံပါဆိုပြီး အတိုတွေ အရှည်တွေ ကာရာတေး တွေ လာကစားပြသွားတော့
ကျုပ်ရဲ့ နောက်ထပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက် ထပ်ပါသွားတယ် အဲ့ဒါတွေကို တင်းနေတာဗျ
ပြုံး -- အဲဒါနဲ့ ခုလို ၀တ်ထားတာနဲ့ သက်ဆိုင်မှု ရှိလား ညီလေး
နဂျေ -- ဘာဗျ.... ခင်ညားကြီး ကျုပ်ကိုလာနောက်နေတာလား သိပ်ဆိုင်တာပေါ့ ဒီလိုဝတ်မှ လန်ထွက်နေမှာပေါ့ အဲ့ဒါမှ ကောင်မလေးတွေ
မျက်စိကျမယ်လို့ ကျုပ်ဘော်ဒါကြီး ဒပဲ ပြောထားတယ် ခင်ညားမသိရင် မပြောနဲ့ဗျ
ပြုံး -- သြော် သြော် ဒါနဲ့ ညီလေးမာဖလာ ရေတွေ ကျနေတယ်နော်
နဂျေ -- အဲ့ ဒါရေမဟုတ်ဘူး ချွေးဗျ... ဒီလောက်ပူအိုက်တာ ဒါတွေဝတ်ထားတော့ ချွေးထွက်တာပေါ့ ဒါတောင်မသိဘူးလား
အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့သူကလဲ ဘာတွေ လာပြီး စန်းစန်းတင့်နေမှန်းလဲ မသိဘူး သွားမယ်
ဟမ် စန်းစန်းတင့် တဲ့ နာ့ကို စန်းစန်းတင့်လို့ ပြောသွားတယ် ဘာပါလိမ့်
စကြာံပြုံးတစ်ယောက် အ၀တ်အစားများ ကောက်ကာ ကော့ပက်ကော့ပက် တွဲလောင်းတွဲလောင်းလျှောက်သွားသော
နဂျေ ကိုကြည့်ကာ နဝေတိမ်တောင် ကျန်ခဲ့သည်
ဒီကြားထဲ သူနားမလည်သော စန်းစန်းတင့်က သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့
လာဦးမယ်နော် နောက်ထပ် စန်းစန်းတင့်ဦးမယ်
« Last Edit: May 01, 2011, 11:58:12 PM by imail »
« Reply #4 on: April 25, 2011, 02:06:13 PM »
စင်္ကြပြုံး တစ်ယောက် နဂျေပေးသောဒုက္ခများကို ဦးနှောက်ဆေးသောအားဖြင့် မာလာဆောင်နောက်ဖက်သို့ တစ်ယောက်တည်း ထွက်ခဲ့ရာ
ကိုယ့်ထက်အရင် ဦးနှောက်ဆေးနေသော ကျောင်းသားဇော်ရဲနှင့်တွေ့နေသဖြင့် နေရာလုခဲ့ရသေးပြန်သည်။
ညနေလောက်ထိ ဦးနှောက်ဆေးပြီးသကာလ ကျောင်းထဲထားခဲ့သော ကောင်မလေးများကို ပြန်ခေါ်ရန် ၀င်ခဲ့ချေတမုံ့။
ကျောင်းထဲအရောက်တွင် လောင်းကုတ်ကြီး တစ်ကားကား လည်ပင်းပတ်ထားသော မာဖလာနှင့် ချွေးများကို သုတ်နေကာ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အပြေးအလွှားရှာနေသာ နဂျေကို တွေ့လိုက်သည်။ နဂျေ သည်လည်း စင်္ကြပြုံးကို တွေ့သွားပြီ
တုံးလုံးချွတ်ကာ ရယ်ဒီဖြစ်နေသော ကောင်မလေးကို စပရိတ်မွေ့ရာအကောင်းစားကြီးပေါ်ဝယ် သူ့အား လက်ယပ်ခေါ်နေသည်ကို
ပြေးလာသည် စင်္ကြာပြုံးထံ နဂျေ အ၀တ်အစားများချွတ်ကာပြေးလာသည်။ စင်္ကြာပြုံးလဲ နဂျေမျက်နှာကို အဓိပါယ် ဖော်တတ်သွားပြီးသကာလ
ထိုင်ပဲ ထိုင်ချရမလို အနောက်ဘက် အုတ်နံရံကိုပဲ ကျောပြေးကပ်ရမလို၊ ဖင်ပိတ်ပြီးပဲ ပြေးရမလိုလို ဖြစ်သွားသည်
သို့သော် ဘာမှ မလုပ်ရပါ..... နဂျေလဲ သူ့ကို ဘာမှ မလုပ်ပါ
နဂျေ -- ဦးလေးကြီး လာ အင်တာဗျူးကြမယ် ကျုပ်ဖြေမယ် လာ လာ အချိန်မရှိဘူး ဒီအချိန် နေညိုပြီး ခဏနေရင် လေပြိုတော့မယ်
ပြောချင်တာတွေ ရှိတယ် မြန်မြန်မေး မေးရမှာက ညီလေး ခုဘာဖြစ်နေလဲ တစ်ခွန်းတည်း
ပြုံး -- အေးအေး ညီလေး ခုဘာဖြစ်နေလဲ (ညီဂျော် မှ လင်းဇာနည်ဇော်ကို မေးသည့်အသံဖြင့်)
နဂျေ -- ကျွန်တော် ခု ဘာလုပ်လဲ သိလား တစ်နေကုန် ကျောင်းထဲ လျှောက်သွားပြီး ထောက်လှမ်းနေတာဗျ...
ပြုံး -- ဘာတွေ ထောက်လှမ်းတာတုန်း ကောင်မလေးတွေကို အနောက်ကနေ ထောက်တာလား
နဂျေ -- ဘာဗျ ပြောတာ နားထောင်စမ်းပါ.... တစ်နေကုန် သွားထောက်လှမ်းလာတော့ ဘာသိလာရလဲ ဆိုတော့
ကျောင်းသားတွေ ပျင်းနေကြတယ်ဗျ ... ပျင်းနေကြတယ်
ပျင်းနေတယ်ဆိုတာက စာပဲ သင်နေကြတယ် စာပဲ ဖတ်နေကြတယ် စာကျတော့ လိုက်မရေးကြဘူး
ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာကိုပဲ အခန့်သား ထိုင်ဖတ်နေကြတယ်ဗျာ
ပြုံး -- ကျောင်းသားဆိုတာ စာဖတ် စာကျက်ရမယ် ဒါပဲမဟုတ်လား
နဂျေ -- ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ... ဒါးဆိုတာ သွေးရတယ် သွေးမှ ထက်မှ သူ့အတိုင်းထားရင် တုံးတတ်တယ်လေ ဒါတောင်မသိဘူးလား
ကျောင်းသားဆိုတာ စာဖတ်၊ စာကျက်ယု့တင်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲ ထက်မြက်လာအောင် သွေးရမယ်
ပြုံး -- ဟာ ဟုတ်သဟ
နဂျေ -- ဟုတ်ရမယ်လေ နောက်ပြီး ဌာနတွေ လိုက်ကြည့်တော့လဲ ဘာတွေတွေ့လဲ ခင်ညားသိလား
ပြုံး -- မသိဘူးလေ
နဂျေ -- အဲ့ဒါပဲ အဲ့ဒါပဲ ခင်ညားတို့က လူကြီးလုပ်ပြီး လေ့လာပါ သင်ယူပါ ဆည်းပူးပါဆိုတာကို ခွေးပူးတာတို့ လူပူးတာတို့ပဲ လိုက်ကြည့်နေတာကိုး
(ဦးလေးပြုံး စိတ်မဆိုးပါနဲ့ခင်ဗျ သရော်စာဆိုတော့ နည်းနည်း လေးလေးပင်ပင်လေး ထည့်ထားတာပါ )
ပြုံး -- တိန် ခွပ်သဟ
နဂျေ -- ဌာနတွေ လိုက်ကြည့်တော့ တောက်ပြောင်တာဆိုလို့ လိင်မှုရေးရာ ဌာနလောက်ပဲ ရှိတာကလားဗျ
ခုံတွေဆို ညီလို့.... ကြမ်းခင်းတွေဆိုပြောင်လို့.... မှန်တွေ ဆိုလက်လို့ ဗျာ... ဖိတ်ဖိတ်ကို လက်နေတာပဲ ဖုန်ဆိုတာ ဘယ်ပြတိုက်မှာ
ပြုံး -- အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလား ညီလေး
နဂျေ -- စကားဆုံးအောင် နားထောင်လေ ကျန်တဲ့ဌာနတွေကျတော့ မှောင်မည်းပြီး ဖုန်တထောင်းထောင်းနဲ့ ဌာနမှူးတွေကလဲ
ငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်ပြီး ထိုင်ခုံ အစုတ်မှာ စာထိုင်ရေးနေလိုက်တာများ ကျလဲ ကျပါပေ့ဗျာ
ဒါ ကောင်းသလားဗျ... ဌာနဆို ဌာနတွေအားလုံး လူစည်ရမယ်လေ ခုတော့ သမိုင်း ဌာနမှာဆိုလဲ ကျောင်းသားလေး ဂိဂိ
(ပြောရတာတောင်မကောင်းဘူး ကျုပ်ကောင်မလေး လုသွားတာ) တစ်ယောက်တည်း တစ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ ကျောက်စာလေးထွင်းလိုက်
သမိုင်းကြောင်းလေး လှန်လိုက်နဲ့၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှာလဲ ဆရာဝန်တွေ သုံးယောက်လား ချောက်တီးချောက်ချက်နဲ့
ကျန်းမာရေးအကြောင်းလေးပဲ ပြောနေတာ တွေ့ခဲ့တယ် ကျောင်းသားရယ်လို့လဲ လောက်လောက်လားလား မတွေ့ခဲ့ပေါင်ဗျာ
ပြုံး -- အဲ့ဒါ အဲ့ဒါက
နဂျေ -- တော် တန် တိတ် ကျုပ်ပြောတာနားထောင်... ကျုပ်စိတ်ဓါတ်တွေ ကျနေတာဗျ ဌာနတိုင်းလူစည်အောင် ကျောင်းသားတွေ ကြိုးစားသင့်
တယ်ဗျ... ကျောင်းသားတွေ စာရေးသင့်တယ် ။။ စာချည်းပဲ ဖတ်နေလို့ မပြီးဘူးဗျ... ခင်ညားသိလား
ပြုံး -- အဲ့ဒါ အူးလေးနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်
နဂျေ -- ဟာ ကျုပ်က ပြောချင်လို့ ပြောတယ်မှတ်နေလား... ခင်ညားကို ခြေထောက်အညောင်းခံ ပြီး လိုက်ရှာနေတယ် ထင်လို့လား
ခင်ညားပြောတော့ naked channel စီအီးအိုဆို ခင်ညား ချန်နယ်မှာ ကောင်မလေးတွေ တုံးလုံးလေးတွေ ချွတ်ပြီး
ဒါကို ဘရိတ်ကင်းနယူး တင်ပေါ့ဗျ ကျောင်းသားတွေ ကြည့်မိပြီး စာရေးရင် ကောင်းတာပေါ့
ဘာမှမသိဘူး ဒီလူကြီး ဖွတ်.... တော်ပြီ လေကုန်တယ် မောတယ် လေပြိုတယ် အရက်သွားသောက်တော့မယ်
« Last Edit: May 01, 2011, 11:59:26 PM by imail »
« Reply #5 on: April 26, 2011, 02:54:57 AM »
Quote from: jayjay on April 25, 2011, 02:06:13 PM
တိန် ... မောင်နဂျေရယ် ... လူကြီးဆိုတော့လဲ ... -ီးကြူ ... အဲ ... တာဝန်နဲ့ ၀တ်တရား အရ ကြူ နေရလို့မအားဖြစ် နေတာပါ ...
နောက်ဆို ခွေးပူး လူပူး တင်မက ကြက်ပူး ၀က်ပူး ကင်းပူး ကွင်းပူး တစ်ပူး ( အဲ ... ဖဲဝိုင်းနဲ့မှား သွားလို့) တွေ ပါ မကျန် လေ့လာပါ့မယ် ....
လောလောဆယ်တော့ ငါ့ကောင်မလေး တွေ ကို ဌာနပြောင်အောင် နဲနဲ ပွတ်ခိုင်းပြီး ထိုင် ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ဟ ....
« Last Edit: May 01, 2011, 11:59:50 PM by imail »
« Reply #6 on: April 29, 2011, 11:31:23 PM »
အင်း!!!အပြင်လောကမလဲ ဘာတွေသတင်းထူး သတင်းဦးတွေရှိနေပီလဲမသိဘူး တော်ကြာခေတ်နဲ့ရင်ဘောင်တန်းမလိုက်နိုင်တဲ့ ဒီအဘိုးဂျီး အိုင်တီခေတ်မှာ ဘဲဥလာကြော်နေတယ်အပြောခံရအုံးမယ် မဖြစ်ချေဘူး ဟိုဟို ဒီဒီ သွားပီး သောက်တင်းတုပ်စရာကုန်ကြမ်းတော့ ရှာအုံးမှပါလေ"
ဘဂျီးတုပ်တယောက် အိမ်တွင်းအောင်းနေတာ ကြာပီမို့ အပြင်လောကနှင့်အဆက်အသွယ်ပျက်နေသည့်အတွက် ဤသို့တွေးမိလေကာ သူ၏စီးတော်ယာဉ် လေးနှင့် အိမ်မှထွက်ခွါပီးသကာလ့် ဦးတည်ရာလမ်းကို ရွာတုန်းက တူအငယ်ဆုံးကောင် မောင်ချောတို့ရှိရာ ကွမ်းသီးသုံးပင် စက်မှူဇုံသို့ ထွက်ခွါလာလေတော့သည်
မောင်ချော၏ အလုပ်ရုံရောက်သော် အဝင်ဝ၌ အစောင့်အမျိုးကောင်းသားလေးမှ တံခါးအထဲမှနေ၍ အလွန်ဖော်ရွေ ယဉ်ကျေးသော တုတ်မျက်နှာပေး အမူအယာဖြင့် လေသံအားချွေတာသောအားဖြင့် ခက်ပြက်ပြက်ဘဲ
ဟကောင် နင်တို့သူဌေး မောင်ချောကို ပြောလိုက် သူ့ဘဂျီး လာတယ်လို့"
"သူဌေးမအားဘူး ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ ဘာသူ့ဘဂျီးလဲ ကျုပ်တို့သူဌေးမှာ ဘာအမျိုးမှမရှိဘူး"
ဟိုက်!!ဒီကောင် ငါ့ကို လွှတ်ကောနေပါလား မဟုတ်သေးဘူးဟ
ဟေ့ !!သာဒင် အပြင်မှာဘာဖြစ်နေတုန်း
ပြောသံနှင့်အတူ မောင်ချောတရောက် ထွက်အလာ ဘဂျီးတုပ်ကိုမြင်သည်နှင့်
ဟာ!!!ဘဂျီး ဟဲ့ကောင် သာဒင် တံခါးဖွင့် အဒါ ငါ့ဘဂျီးကွ မင်းတော့ကွာ မမေးမစမ်း ရမ်းတုပ်နေပြန်ပီ သွား မြန်မြန် ဖွင့်
ထိုအခါမှ အနှီ သကောင့်သား သာဒင်မှာ တံခါးကို ဖွင့်ပေးရင်းက
ဟီး!! ဘဒွေး အနော်မသိလို့နော် ခွင့်လွှတ်ပါ
"အေးပကွာ ထားပါထားပါ ရပါတယ်
နို့ မောင်ချော ဘာလို့ နင်ဒီလောက် လုံခြုံရေးအသိရှိနေတုန်း အရင်ကဆို အထဲကို ဘယ်လိုဝင်ဝင် ရနေတာကို"
ဂလိုဘဂျီးရ!! ကျွန်တော်အခု ကားထုပ်လုပ်ရေး လုပ်နေဒယ်
ဘဂျီးတုပ်။ ။ ဟင်!!!အံ့အားတကြီးနှင့်
နင်က ကားထုပ်နေတယ် ဟုတ်လား?ဟကောင် ဟုတ်မှလုပ်စမ်းပါကွာ နင်ရွာမှာ ထဲက ဒီလောက်သောက်ပြင်းထူပီး နေလို့ ဆယ်တန်းတောင်မအောင်တာ အင်ဂျင်နီရာလဲမဟုတ် ဘာမဟုတ်က ကားထုပ်နေတယ် ဘာတုန်း ဆိုက်ကား လား? ဟု ဘဂျီးတုပ်ထုံးစံအတိုင်း အလွန်အောင်မြင် ပြဲအာသော လေသံဖြင့် ပြောရာ မောင်ချောမှ
ရှူး!!!!တိုးတိုး ဒီဘဂျီးနယ် ကို့တူမောင်ကို ဘဲ့နဲ့လုပ်ငယ်ကျိုးငယ်နာလာဖော်နေရတုန်း ဒွတ်ခဘဲ
ဘဂျီးတုပ်။ ။မဟုတ်လို့လား နင့်ဟာက
ချော။ ။ ကဲကဲ ငါ့ဘဂျီးကလက်တွေ့ပြမှ ယုံမှာကိုး လာလာ အလုပ်ရုံထဲမှာပြမယ် ကျုပ်ဘယ်လောက် ကြိုးစားထားလဲဆိုတာ
ဟုဆိုကာ အရှေ့မှဦးဆောင်ကာ သွားလေတော့သည် အထဲတွင်ဘဂျီးတုပ် မြင်လိုက်ရသည်ကား
1994 ခုနှစ် မှအစချီ၍ 2000 ခူ့နှစ် ဒီဘက်ပိုင်းထိ Model မြင့် ဂျပန်ပြည်လုပ် HiAce ကားတွေတန်းစီထားသည်ကို မြင်ရလေသည်
တုပ်။ ၊ ဟကောင်မောင်ချော အဒါတွေ နင်က ထုပ်တာလား
ချော။ ။ အလွန်တရာမှ ပိုင်နိုင်သော အပြုံးနှင့်
ဟ ဟ ဘဂျီးတုပ် ယုံပီနော် ကျုပ် ကားထုတ်နေဒါ
တုပ်။ ။ ဟကောင် လဂွကောင် နင့်ဘဂျီးက အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ နင်သိတယ်နော် လာမညာနဲ့ ပြောစမ်း မှန်မှန်
ဘယ်မှာတုန်း ကားထုပ်တာဆိုရင် ဘော်ဒီကို ပရက် နင်းတဲ့ မို တွေ?
ဘယ်မှာတုန်း ဆေးမှုတ်တဲ့ ရုံတွေ?
ဘယ်မှာတုန်း ကွန်ဘေရာတွေ ကရိန်းတွေ ဝယ်ဒါ မရှင်းတွေ?
ချော။ ။ ဟိုး ဟိုးထားဘဂျီး!!!!!!ဘဂျီးတော့ သွားပီ အိုင်တီခေတ်မှာဘဲဥကြော်နေပီ
ဘဂျီးအင်ဂျင်နီရာမှန်တယ် ကျွန်တော်သိတယ် ဒါပေမဲ့ ဘဂျီး ကားထုတ်နိုင်လား ကဲ ပြော?
တုပ်။ ၊ ဟိုက် ကို့ရှူးကိုပက်ပီ
ဟကောင် ကားမပြောနဲ့ မူလီတောင် ကွာလတီမှီအောင် မထုတ်နိုင်ပါဘူးကွာ
ချော။ ။ ဒါဘဲလေ ဘဂျီး လက်ထက်မှာ မလုပ်နိုင်တာကို ဘဂျီးတူ ကျုပ်မောင်ချော လုပ်နေပီ ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းဘာဟာဟာ!!!!!
တုပ်။ ။ ဟကောင် နင်က ကားက ဘယ်ဘီးကစပီး ရက်လို့အရှေ့သွားတာလဲ မသိတဲ့ကောင်က
ချော။ ။ ဟိုးထား ငါ့ဘဂျီး ဟုဆိုကာ သူ၏ နားထင်အား လက်ညှိုးနှင့်ထောက်ပြပီး
"ဒီမှာဘဂျီး တခုဘဲလိုတယ် ဘာမှတက်စရာမလိုဘူး အဒါက နားထင် ဗျ နားထင်!!!
တုပ်။ ။ ဟင်!! နင်က နားထင်နဲ့ကားထုတ်တယ်ဟုတ်လား လဖွတ်!!!!ပေါက်ကရ ပြောနေပြန်ပီ
ချော။ ။ ဝေးပ ဘဂျီးရာ ဝေးပ
တုပ်။ ။ ကဲ လင်းစမ်းပါဦးကွ မင်းရဲ့ မဟာရွှေဉဏ်တော်ဘယ်လိုအသုံးချပီး ဒီဂျပန်လုပ် HIACE ကားတွေကို ထုတ်သလဲဆိုတာ
ချော။ ။ဒီလိုဗျ ရှေးက ရှဲမှာ ကျွဲခေါင်းလေးတွေ့လား
တုပ်။ ။ ဟကောင် အဒါကျွဲခေါင်းမဟုတ်ဘူး တိုရိုတာရဲ့ လိုဂို ဟ
ချော။ ။ လိုဂိုသောဘာသော မသိဘူးဗျာ အဒီကျွဲခေါင်းကို ကျုပ်တံဆိပ်ကပ်လိုက်တယ်ဗျာ
ချော။ ။ မပီးသေးဘူးဘဂျီး ဘီးအောက်ကိုကြည့်လိုက် ဆေးတွေဖရိန်မှာ ပြန်မှုတ်ထားတယ် အဒါကျုပ်ပြန်လုပ်ပေးထားတာ
တုပ်။ ။ ဪ ----ဂျပန်တွေ ကားထုတ်တာ သောက်သုံးမကျလို့ နင်က ဆေးထက်မှုတ်ပေးတာကိုး
ချော။ ။ ဒါဘဲလေ ဒင်းတို့ဂျပန်ငပုတွေ ဘာကားထုပ်ထုပ် ကျုပ်တို့လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အချောသက်ပေးမှ တံဆိပ်တက်ပေးမှ ဒီမှာ ကားလို့ အမည်တပ်ပီးသုံးလို့ရတာလေ ဟဟ ဘဂျီးတူ ဘဲဗျာ ဘယ်ခေပါ့မလဲ
တုပ်။ ။အေးအေး ပေါက်ပီ ပေါက်ပီ ဟားဟား နင်ပြောမှဟုတ်သလိုလိုဘဲဟ မောင်ချောရ နော်
ဒီငပုတွေ က နည်းပညာမြင့်တယ် ကဘာမှာ ဘာညာနဲ့ သောက်လေကျယ်နေတယ် ဟိဟိ နင်တို့လိုမဟာသုတစုံလင်ရွှေဉဏ်ရှင်တွေနဲ့တွေ့မှ ဒင်းတို့မှက်မှာ'
ချော။ ။ဒါဘဲလေဘဂျီးရ ဦးနှောက်ကို လွှာပီးသုံးတော့ လူသားအရင်းမြစ် မကုန်ဘူးဗျာ ဒီငပုတွေ ကြိုက်သလောက်ထုပ် လူအား ငွေအား အကုန်သုံးဗျာ အချိန်တန်ရင် ကျုပ်ကတံဆိပ်မတက်မခြင်း ကားလို့မမြည်ဘူးလေ ဟဟ
အဒါ ရာဇဝင်ကြွေးဆပ်တာဘဲ ဗျ ဒီကောင်တွေ ကျုပ်တို့ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေ ကို နှိပ်စက်လာတာ ခု ကျုပ်တို့အလှည့်ရောက်ပီ ဘဂျီးတုပ်ရေ ဟားဟားဟားဟား!!!
ကဲကဲ မောင်ချော ရေ အချိန်လဲလင့်ပီ ဘဂျီးလဲပြန်မယ်ကွာ နောက်မှတွေ့ကျသေးတာပေါ့
" ဪ----သနားစရာဂျပန်ငပုတွေပါလား သူတို့ခမြာ သူတို့ကိုသူတို့ ကဘာမှာ နည်းပညာအတော်ဆုံးထင်နေတာ "
« Last Edit: December 08, 2011, 03:14:38 AM by Bagyitoke »
« Reply #7 on: May 25, 2011, 06:03:54 PM »
ဘဂျီးတုပ်တယောက် ဂျပန်ကိုလက်စားချေတဲ့ သူ့တူဆီကပြန်လာထဲကအိမ်တွင်းမှာအောင်းနေရတာပျင်းပျင်းရှိလို့ ဒီတခါ နဂါးတို့ပျော်စံရာ တိုင်းပြည်က နာမည်ကျော် ရှောင်လင်ကျောင်းသို့ ဗဟုသုတရှာမှီးရန်အလို့ငှါ သွားလေတော့သည်
ကျောင်းဝရောက်သည်နှင့် အတွင်းအားအပြည့်ပါသော အသံနက်ကြီးဖြင့်
ဟိုက် လဂွ လန့်လိုက်တာ -----ကလူကလူ
ဘုန်းတော်ကြီးတပါးက တောင်နံရံကြားကနေ ကိုယ်ဖော့ပညာနဲ့ ဆင်းလာပီး ဘဂျီးတုပ်ရှေ့ ဗျုန်း ဆိုရောက်လာတယ်
ဘာရမလဲ ဘဂျီးတုပ်လဲ တရုပ်ကားတွေကြည့်ထားတာ ဒီလောက်တော့ ဖောတက်တာပေါ့
အော်မီတော်ဖူ!!!!!! ဒီလိုပါကိုယ်တော် တပည့်တော်က ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ တိုင်းပြည်က လာတဲ့ ဗန်တိုပြတ် သိုင်းဆရာ ဘဂျီးတုပ်ပါ ကိုယ်တော်တို့ရဲ့ ရှောင်လင် ကျောင်းက သိုင်းပညာကို လေ့လာဆည်းပူးရင်း အပန်းဖြေခရီးထွက်လာတာပါ
ကောင်းပါပီ ဒါဆို ကျောင်းထိုင်ကိုယ်တော်နဲ့တွေ့ရအောင် ကြွပါ
ဘဂျီးတုပ်လဲ အဆိုပါကိုလ်တော်နောက်မှ လိုက်သွားလေသည်
ဒဂါတုပ် !!! မောင်ရင်က မောင်ရင်တို့နန်းတွင်းသိုင်းပညာတက်ထားတယ် ဟုတ်
----မှန်ပါ သို့ပေသော်လဲ တပည့်တော်သင်ယူလေ့လာစရာ များကျန်နေသေးလားလို့ အရှင်ဘုရား ကိုလာလျှောက်တာပါ
ကဲဒါဆို အတွင်းအား ပညာ စလိုက်ရအောင် ဟုဆိုကာ နဂါးအားမာန် အတွင်းအားပညာအား စတင်သင်ပေးရန် အတွက်
ဟာ!!!ဒဂါတုပ်ရဲ့ အတွင်းအားက ကောင်းတယ် ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူဘဲ သင်စရာမလိုဘူး ရပီ
---မှန်ပါ တပည့်တော်တို့ ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ မြိုချတာ အလွန်ကျွမ်းပါတယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ် အမြဲ မြိုချနေရတာ အကျင့်ပါပီး အတွင်းမှာ ဝါယောဓာတ်တွေ အားကောင်းလာပီး ကျင့်စရာမလိုဘဲ မွေးရာပါ အတွင်းအားပါရမီရှင်တွေ ဖြစ်လာတာပါဖုရား
အလို!!!ကောင်းလေစွတကား တို့ရှောင်လင်ကျောင်းမှာတော့ ဒီလိုအတွင်းအားရအောင် နှစ်နဲ့ချီလေ့ကျင့်ရတယ် ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် နှစ်တထောင်ကြာသီးကိုစားမှသာ ဒီလိုအတွင်းအားရတာ ဒဂါတုပ်က အဒီလိုကျင့်စရာမလိုတော့ ကုသိုလ်ထူးတာပါ့
ကဲ ဒီတခေါက် လက်နက်မဲ့သိုင်း ပညာစရအောင် အကွက်ခင်းပါ ဒဂါတုပ်!!!
ဘဂျီးတုပ်လဲ အကွက်ခင်းရင် ဖိနပ်ကိုချွတ်လိုက်ပီး ကတောင်း ကြိုက်လိုက်ပါတယ် ပီးတော့မှ ရိုးရာဗန်တိုပြတ် ၏ အကွက်အတိုင်း ရှေ့ခြေထောတ်ကို ဆန့် နောက်ခြေကို ယို့ပီး လက်သီးကို ရင်ဝမှာကာ လက်ဝါးကို ရှေ့သို့ဆန့်ထုပ်လေသည်
"ကဲ ဒဂါ အကွက်ကြည့်" ဟုပြောပီးသည်နှင့် ရှောင်လင်ကျောင်းတော်၏နာမည်ကျော် မိုးကြိုးလက်ဝါး ၁၂ ကွက် သိုင်းဖြင့် စတင် တိုက်ခိုက်လေသည်
အတွင်းအားအပြည့်နှင့် လက်ဝါးမှ လေခွဲသံတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆူညံ၍နေလေသည် အနီးနားမှ ဖုန်လုံးများ ထလာပီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့် ဘဂျီးတုပ် အားသဲကွဲစွာမမြင်ရတော့ပါ
ဖောင်း-----ဖြောင်း-----ကျယ်လောင်သောအသံထွက်ပေါ်လာပီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှာ ဝါးတရိုက်အကွာခန့် လွင့်ထွက်သွားလေသည်
"ဒဂါတုပ်ပညာ ပြည့်ဝပေတယ် လက်နက်မဲ့သိုင်းမှာ ကိုယ်တော်ထက်သာတယ် ဘယ်လိုကျင့်ပါလဲ?"
---မှန်ပါ တပည့်တော်တို့မှာ လက်နက်မဲ့သိုင်းက ကလေးတွေက အစတက်ပါတယ်ဘုရား
"မဟုတ်သေးဘူး ဒဂါ သိုဏ်းထက်ကို ဒဂါရဲ့ အရှောင်အတိမ်းတွေက အရမ်းကြည့်ကောင်းနေတယ် ဘယ်လိုကျင့်လဲ ပြောပြပါလား?"
အလို!!!ဒဂါ ကားနဲ့ကျင့်တယ် ဟုတ်စ သေဘေးနီးရန်ကော
--တပည့်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကိုသာလာပီး ကားလမ်းကူးတာကို နေ့စဉ်ကျင့်ပါဘုရား
ကလေးတွေက အစတက်တယ်လို့ပြောတာ အဒါပါဘဲ မွေးထဲက
လမ်းတွေပေါ်မှာ နေ့စဉ်သွားလာရင်းက ခုလိုတက်ကုန်ကြတာပါ
သီးသန့်နေရာပေးပီး အချိန်ပေးပီး ကျင့်စရာမလိုပါဘူး
ဒဂါတုပ်မှာ ဆက်ပီးလေ့ကျင့်စရာမလိုတော့လောက်အောင် သိုင်းပညာ ပြည့်စုံနေပါပီ
ဒဂါသာအပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ဘုန်းကြီးကို ဒဂါ့ရဲ့ အရှောင်အတိမ်းပညာလေး ပြန်မျှဝေခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပရစေ
ဟု ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှာ အတင်းကိုနားပူစနားဆာလုပ်လေသောကြောင့် အနှီဘဂျီးတုပ်လဲ ရှောင်လင်ကျောင်းတော်သို့ ပညာပြန်လည်ဖြန့်ဝေခဲ့ရလေသည်
ပြန်ခါနီးတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ပြောလိုက်သည့်စကားတခွန်းကားနားထဲကမထွက်ခြေ အဒါကတော့
ဒဂါတုပ်တို့ဆီကလူတွေရဲ့ ရှောင်တိမ်းမှူပညာကတော့အံ့မခန်းပါဘဲ ဘုန်းကြီးတို့ ရှောင်လင်ကျောင်းတော်ကတောင် အရှုံးပေးရပါတယ် ဟူသတည်း
« Last Edit: December 08, 2011, 03:15:09 AM by Bagyitoke »
« Reply #8 on: May 25, 2011, 06:10:48 PM »
ဘတ်စကားပါ တိုးစီးခိုင်းလိုက်ပါ ဘတုပ်ရယ်....
ှGatling Gun နဲ့ အတွဲလိုက် ပစ်ရင်တောင် ထိချင်မှ ထိတော့မှာ....း)
SUCCESS is the only option, Failure's not.......!!!!!!!!!!!!
« Reply #9 on: May 26, 2011, 01:20:27 PM »
တာဝန်ရှိသူ နဲ့ တာဝန်သိသူ
တစ်နေ့သနှိုက်.. အချစ်တက္ကသိုလ် မာလာဆောင် ရေ/မီး တာဝန်ခံ တာဝန်ရှိသူ မီးသွေးသည်.. တာဝန်ရှိစွာဖြင့်.. ကျောင်းသူများ အဆောင်အားလျှောက်ပတ်ကြည့်သောအခါ...
ဟဲ့.. နင်တို့တွေ ... ကျန်း.. မီးလုံးတွေ ခန ခန ကျွမ်းတယ်.. ပိုထူးခြားတာက အိပ်ခန်းမီးလုံးတွေနဲ့ အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်းမီးလုံးတွေ ခနခန လဲနေရ
တယ်.. မီးဖိုချောင်မီးလုံး ငါတပ်ပေးထားတာ ခုထိ မကျွမ်းဘူး.. ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း
အော်.. ကိုမီးသွေးရယ်.. အိပ်ခန်းမှာက ညကျ စာဖတ်ရတယ်လေ.. ပီယာနိုဆရာမလေး. ဘကြီးထောင်.. မောင်မောင်ရဲ..
ဟင်.. အဲဒါ ဘာ.. ဘာသာတွေလဲ.. နွေဦးရ
ကိုမီးသွေးကလဲ.. ကျွန်မတို့ ဘာသာရပ်တွေ မသိပဲ နဲ့.. ထားပါ.. အဲဒါ စာဖတ်ရတော့ မီးက မလောက်ဘူးလေ.. အိပ်ခန်းထဲ ဖတ်သူဖတ်
ရေချိုးခန်းဖတ်သူဖတ်.. အိမ်သာထဲ ဖတ်သူဖတ်နဲ့ ကြိုးစားရလို့ မီးလုံးကျွမ်းတာပါတော့.. မီးဖိုချောင်ကတော့.. မှိန်လို့ မဖွင့်ကို မဖွင့်တာ
အော်.. တာဝန်ရှိသူ မီးသွေးမှာလဲ.. တာဝန်ရှိသည့်အလျှောက်.. ဘာမှ မပြောတော့ပဲ.. မီးလုံးလဲပေးပြန်လာခဲ့သည်ပေါ့... (တာဝန်ရှိသူဆိုတာ
မိုးစက် . တစ်ယောက် ကွန်ပြူတာ လက်တော့နဲ့ မာလာဆောင်ရှေ့ရောက်လာဘာသည်..
ဗျာ.. အမ မာယာ ဘာလို့လဲ
ဟို .. အမလက်တော့လေ.. လေးနေလို့
ဟုတ်.. ကြည့်ပေးမယ်.. ဖွင့်လေ..
လေးမှာပေါ့.. ဘာပေါ့ ညာပေါ့နဲ့ ကွိကွ လုပ်ပေးသွားပြီး ထွက်လာ..
ဗျာ.. မ၀ိုင်း ဘာဖစ်
အမ အပေါက်က အသံ မထွက်လို့
ဟဲ့.. ငါ့လက်တော့ ပြောတာဟဲ့.. နားကျပ်က အသံ မထွက်ဘူးလို့
အော်.. ဒါများ.. ဘာ ညာ ကွိ ကွ.. ရပီ
ဘယ့်နှယ်ဗျာ.. ကိုယ့်ဘာသာကို ကျေင်းထဲ ၀ိုင်ယာလက်စ်လေး ထောင်မလို့ပါဆို..
အီဗာထုပ်တွေ.. ပစ်ထားကြတာ... အ့မယ်.. အဖော်လေးတောင်ပါသေး.. ဟိုက် .. သောက်ခွေး.. ဒိုင်တိုအတုက တစ်ချောင်း
အော်.. ငါ့ အမတွေ ညီမတွေ.. ဘာတွေ သုံးနေလဲ လို့ သူများမြင်ရင် မဖြစ်ပါဘူး..လေ... အမှိုက်ပုန်းထဲ.. လွင့်ပစ်ရင်လဲ.. သူများတွေ မြင်ရင်
တစ်မိုးထင်မယ်.. ငါတို့ အဆောင်သူတွေက ကလီးယားတယ်ဆိုတာ မသိပဲ စွတ် အထင်သေးနေကြအုန်းမယ်.. ကဲ.. ငါပဲ ကျင်းတူုး မြေမြုပ်
ထိုသို့ မိုးစက် တစ်ယောက် တာဝန်သိစွာ မည်သူမျှ မခိုင်းသော အလုပ်တစ်ခုကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကျင်းတူး မြေမြုပ် ပေါက်ပြားအုပ်စဉ်
တာဝန်လဲ မရှိ.. တာဝန်လဲ မသိသော ကျောင်းသို့ လာတက်သူ ကျောင်းသားတစ်စုမှ မြင်ပြီး လှမ်းအော်သည်ကား
အဟားးး ကျောင်းကြီးရဲ့.. ဆရာလေး.. ဘယ့်နှယ် ကောင်မလေးတွေ အဆောင်နောက် ပေါက်ပြားကြိးနဲ့ပါလား ဟားဟား
မိုးစက် ဘာမှ မပြောပဲ.. လက်တော့လေးနဲ့.. အချစ်တက္ကသိုလ် ဆာဗာခန်းထဲ အေးဆေးပြန်လာခဲ့လေသည်... ။
Pages: 1234567 8910 11 | Go Up